Halis, hargeysa oo qaraxyo ka diyaargaroobeysa: ciidamo meelo gaar ah la soo dhoobay, hudheelo waaweyn oo bartilmaameed lagu sheegay – Banaadir weyne
Halis, hargeysa oo qaraxyo ka diyaargaroobeysa: ciidamo meelo gaar ah la soo dhoobay, hudheelo waaweyn oo bartilmaameed lagu sheegay
Waxaa caawa si weyn loo dareemayaa dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo ay ciidamada kala duwan ee Somaliland ka wadaan gudaha Hargeysa.
Tan iyo habeenkii xalay wax weyn ayaa iska beddeley dhaqdhaqaaqa dhanka amniga ee magaalada Hargeysa. Sida ay shegeen ilo wareedyo kala duwan waxaa hay’adaha Amniga ee Somaliland lagu soo wargeliyey falal amni darro inay ku soo waajahan yihiin Hargeysa iyo Berbera.
Wararka ayaa muujiyey in habeenkii xalay si weyn loo baadhay agagaarka iyo gudaha Hudheel ay si weyn u adeegsadaan jiifkiisa dadka ajaanibta ah, taasoo lagu sababeeyey inuu soo baxay la tuhun ah weerar isqarxin ah oo ku soo maqan hudheelada ay degaan shisheeyaha gaar ahaan kuwa u dhashay dalaka Reer Galbeedka.
Waxaa digniin la siiyey Shisheeyaha u shaqeeya hay’adaha ajaanibka ah iyo qaramada midoobey, waxaan ciidanku isku gadaamay agagaarka degaanka ay ka hawlgalaan wakiilada Dawladda Itoobiya.
Dadka qaar ayaa waxay ku sababaynayaan shakiga hadda ku yimi Xukuumadda Somaliland inuu ka dhashay Saamiyada dawladda Itoobiya laga siiyey Dekedda Berbera iyo hanaanka Diimoqraadiyadda oo qaangaadhay inay keeni karaan inay ku soo jeediyaan Kooxaha Islaamiyiinta ah ee dagaalada ka wada Koofurta Somalia.
Ma jiro wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay Xukuumadda iyo Kooxaha Islaamiyiinta ah midnaba
Goodax “Duubabka dhaqanka waxay go’aan ku gaareen in Hiiraan maamul goboleed gaar loo sameeyo”
Dhismaha maamul gobolleed looga dhawaaqay magaalada Beledweyne
Soomaaliya oo ku gacan seyrtay doodda Kenya ee Badda
Dacwadda Muranka badda ee Dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo si rasmi ah u billaabatay
US bombers drill over Korean peninsula after latest N.Korea launch
The Somali Hero Of The Day – 1st Prime Minister of Somalia Abdullahi Issa Mohamud
Zimbabwe’s opposition leader Morgan Tsvangirai ‘critically ill’ in hospital
US State Department adds three people affiliated with Al-Qaeda to terror list
Raids kill nine in central Yemen – medical official, residents
34 nationalities among Spain attack killed and wounded
US lifts ban on refugees from 11 ‘high risk’ countries
Fugitive Catalan Leader Launches Campaign From Belgium
Egypt, Gulf countries say Qatar displaying ‘lack of seriousness’ in response to their demands
German police break up ‘far-right terror cell’
Kooxo hubeysan oo Muqdisho ku dilay Col Cabdulaahi Sabriye
Man shot dead by armed officers near Bristol ‘pointed gun at motorist’
Yemen’s Hadi rejects UN-proposed peace deal
£100m of UK aid budget to be spent controlling immigration from Africa